ဘ​လော့​ခေါင်း​စဉ်​ရှေ့​က ​ပုံ​လေး​နဲ့​အ​လှ​ဆင်​နည်း ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​သည်​တစ်​ခါ ​တင်​တဲ့ ​အ​ကြောင်း​ရာ​လေး​က​တော့ ​မိ​မိ​တို့​ဘ​လော့​ရဲ့ Title ​ဆို​တဲ့ ​ခေါင်း​စဉ်​ရှေ့​မှာ ​ပုံ​လေး​တွေ​နဲ့ ​အ​လှ​ဆင်​နည်း​လေး​ပါ။ ​ကျ​နော် ​ထည့်​ပြ​ထား​တဲ့ ​ပုံ​လေး​ကို ​ကြည့်​လိုက်​ပါ
​ပ​ထ​မ​ဆုံး ​ပုံ​လေး​တွေ ​ရှာ​ဖွေ​ဖို့ www.google.com ​မှာ 'animated picture' ​ဆို​ပြီး​ရှာ​လိုက်​ပါ။
​ပုံ​ရဲ့​လင့်​ကို​ယူ​နည်း ။ ၁ ။
​မိ​မိ​တို့ ​လို​ခြင်​သော ​ပုံ​တွေ့​ပါ​က ​ညာ​က​လစ်​ပေး​လိုက်​ပါ ​နောက် properties ​ကို​က​လစ်​ပါ... ​အဲ​မှာ ​ဇ​ယား​ကွက်​လေး​တစ်​ခု​ကျ​လာ​မယ်. location ​ဆို​တဲ့​နေ​ရာ​က ​လင့်​ကို​ယူ​လိုက်​ပါ... ​ပုံ​ရဲ့​လင့်​ကို ​ရ​ပါ​ပြီ​နော်...။ ။
​ပုံ​ရဲ့​လင့်​ကို​ယူ​နည်း ။ ၂ ။
​လို​ခြင်​တဲ့​ပုံ​ကို ​ညာ​က​လစ်​ပေး Save Image As ​ကို​က​လစ်​ပြီး ​ဆေ့​ထား​လိုက်​ပါ. ​ဆေ့​ထား​တဲ့ ​ပုံ​ကို www.minus.com ​ဆိုဒ်​မှာ Upload ​တင်​လိုက်​တာ​နဲ့ Direct Link ​ဆို​တာ​ကို ​ယူ​လိုက်​ပါ... ​ပုံ​ရဲ့​လင့်​ကို​ရ​ပါ​ပြီ။
​ကဲ​ဗျာ ​ပုံ​ကို​လင့်​ယူ​တာ​တော့ ​ရ​ပြီ...​ဘ​လော့​ပေါ်​ထည့်​နည်း​လေး​ကို ​စ​လိုက်​ကြ​ရ​အောင်​နော်...
►5- EXPAND WIDGET TEMPLATES ​ကို​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​ဖို့​မ​မေ့​ပါ​နဲ့​နော်...။
►6- Ctrl+F ​အ​ကူ​ညီ​ဖြင့် ​ပေး​ထား​တဲ့ ​ကုဒ်​ကို ​ရှာ​လိုက်​ပါ။
​သည်​ကုဒ်​ကို​ရှာ​ပါ ​တွေ့​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ ​သူ့​ရဲ့​အ​ပေါ်​က​နေ ​အောက်​က​ကုဒ်​ကို ​ထည့်​ပေး​လိုက်​ပါ။
<img src=" ​ပုံ​ရဲ့​လင့်​ကို​သည်​မှာ​ထည့်​ပေး​ပါ " style="border-width:0px"/>
​ကဲ​မိတ်​ဆွေ​တို့ ​အ​ဆင်​ပြေ​လောက်​ပါ​ပြီ​နော်... ​အ​နော် ​မန်​မန်​စား​လိုက်​အုံး​မယ်​ဂျာ
Yemin Soe July 14, 2016 at 9:27 PM
Google Translate ​အ​လံ​လေး​တွေ ​ထည့်​ကြ​မယ်